Oviana no nanomboka ny fiompiana saka? | Noti saka
Oviana no nanomboka ny fiompiana saka?
Ilay saka izay ananantsika any an-tranontsika ankehitriny dia manana razambe izay tsy maintsy nandeha lavitra mba hiterahana azy. Niainga avy tany amin'ny tany efitra nahamay izy ireo nankany amin'ny toerana azo antoka sy mangina miaraka amin'ireo zava-manan'aina izay tsy te-hanakaiky ny biby hafa: olombelona.
Araka izany, ny Felis catus Ilay biby no tena nahomby indrindra, satria rehefa nitombo ny isan'ny zanak'olombelona, ​​dia nitombo koa ny isan'ireo trano nipetrahan'ny volo iray izay nohajaina tsikelikely. Fa, Oviana no nanomboka ny fiompiana saka?
Ny fiompiana saka nanomboka tany Egypt tokony ho 4500 taona lasa izay. Tamin'izany fotoana izany dia nanamboatra voa sy katsaka ny Egyptiana taloha ary nitazona azy ireo tao amin'ny fitoeram-biby, toerana nalehan'ny mpikiky, izay lasa rembin'ny saka dia. Tena tian'ny olona izany ka nifehy ny pesta ary ny saka dia nanana "sakafo maimaimpoana" ka niforona tsikelikely ny fifanajana sy fifampitokisana teo amin'ireo karazany roa ireo.
Saingy tsy nisy izany rehetra izany raha tsy nanana fahasahiana nanatona biby goavambe sy lava kokoa toa ny olombelona ny saka afrikana saka.
Misaotra ny sambo sy ny mpivarotra, ny saka dia afaka nahatratra an'i Gresy 3600 taona lasa izay, ny sisa amin'ny Mediterane manodidina ny 3000 taona lasa, ary manerana an'izao tontolo izao. Miaraka foana amin'ny zanak'olombelona, ​​manao izay mahomby indrindra ataon'ireto biby ireto: biby mpikarakara biby sy biby mampinono kely. Io toetra ratsy mpiremby io izay, mandraka androany, dia mbola velona be.
Ny saka. Ny biby izay, na dia afaka mampianatra zavatra aza isika, dia ho bebe kokoa amin'ireo izay ampianariny antsika, ny fomba hiainana fiainana amin'izao fotoana izao. Betsaka no tsy maintsy nijaly mandra-pahatongan'ny androntsika, indrindra mandritra ny vanim-potoana Medieval. Saingy soa ihany fa fantatsika izao fa amin'ny fanajana sy ny firaiketam-po dia afaka manana namana tena tsara ao an-trano isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Oviana no nanomboka ny fiompiana saka?
Clara dia hoy izy:
Monica malala! Hitodika any aminao aho rehefa manana fanontaniana momba ny saka sakafoko aho, dia ho tadidinao io, tabilao volomboasary tsara tarehy niseho tao amin'ny efitranoko…. Eny, avelao aho hiteny aminao fa anio dia raisiko izy mba hivezivezy, saingy manana fisalasalana aho, satria mbola nivoaka teny amin'ny arabe izy, (tamin'ny herinandro lasa izy nandeha 2 andro) ary niverina nokapohina izy, androany dia nanapa-kevitra ny hampandeha azy , holazainao amiko ny antony tsy, efa nanao aho, ary tsy fantatro raha salama aho, saingy natahotra aho sao tsy hanana hormonina hanamarihana faritany intsony aho rehefa mivoaka, ary tsy afaka miaro tena. avy amin'ny saka hafa! Mbola miala tsiny aho, saingy nanapa-kevitra aho satria mieritreritra fa misy ny mety hijanonany ao an-trano ary tsy hivoaka, satria raha ny zavatra novakiako dia mitaky risika amin'ny aretina, lozam-pifamoivoizana, kapoka, azafady , azonao atao ve ny manampy ahy hahafahako milamina, na milaza amiko ny maharatsy sy ny tombony azo avy amin'ireo zanak'alika mania? Raha lazaina amin'ny teny hafa dia betsaka ny mpanampy ao an-trano, fa amin'ireo izay raisintsika ho efa olona eny an-dalambe ary mbola mivoaka tsindraindray…. tsia, ary tena tsy haiko raha nandray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra aho!
Valiny tamin'i Clara
Fanapahan-kevitra tsara foana ny neutering. Ity fandidiana ity dia afaka mampitony ny saka, fa raha mila miaro tena izy dia afaka manohy manao izany.
Mba hifehezana ny faritanin'izy ireo dia manisy marika amin'ny hoho ny saka, fa amin'ny urine koa. Ny fanamarihana dia tsy hoe mamela dian-tongotra na marika fotsiny, fa mamela koa ireo pheromones-ny, izay "hafatra" izay "vakian'ny saka" hafa ary manao zavatra mifanaraka amin'izany. Amin'ny Ity lahatsoratra ity manana fampahalalana bebe kokoa ianao.
Raha manana fanontaniana hafa ianao, dia aza misalasala manontany 🙂
Ahoana no hifehezana ny zanatany saka?
Mitomany ve ny saka?